Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Nizotra tamin'ny fifohazana tamin'ny sidina Iraisam-pirenena ny fizahantany any Afrika Atsinanana
Seranam-piaramanidina lehibe iraisam-pirenena no kasaina hanohy ny sidina mpandeha ho any Kenya, hitondra fanantenana vaovao ho an'ny fanarenana haingana ny fizahan-tany isam-paritra aorian'ny fameperana ny fitaterana an'habakabaka mandritra ny efa-bolana mba hifehezana ny fihanaky ny areti-mandringana Covid-19.
Kenya, foibem-paritry ny fizahantany ho an'i Afrika Atsinanana sy Afovoany dia nanambara ny toerany hanokatra ny lanitra hatramin'ny voalohandohan'ny volana aogositra, miaraka amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe sy lehibe natokana hanohy ny sidina voatondro ho an'ny mpandeha.
KLM Royal Dutch Airlines, ny mpizahatany mpizahatany avy any Etazonia sy Eropa dia nilaza fa hanohy ny sidina manomboka ny alatsinainy ho avy izao raha ny British Airways (BA) kosa dia hanomana ny sidina mankany Nairobi ny sabotsy 1 aogositra ary Qatar Airways ny alatsinainy ho avy izao. 3 aogositra.
Ny minisitry ny fizahantany Kenyana, Najib Balala, dia nilaza fa ny alahady lasa teo dia ny seranam-piaramanidina lehibe avy amin'ny loharanom-pizahan-tany malaza indrindra eto an-tany dia vonona hanohy ny sidina mankany Kenya, foibem-pizahan-tany ho an'ny faritra Atsinanana sy afovoany afrika.
Air France sy Emirates no kaompaniam-pitaterana an'habakabaka manerantany manohy ny sidina mankany Kenya amin'ny voalohan'ny volana aogositra.
Hanohy ny sidina mankany amin'ny firenena ny Air France ny alakamisy 6 aogositra ary hiasa iray mankany Paris isaky ny zoma.
Qatar Airways dia kasaina hasaina sidina 14 isan-kerinandro, raha British Airways kosa dia sidina efatra isan-kerinandro. KLM dia hiasa sidina efatra isan-kerinandro ihany koa (sidina efatra isan-kerinandro).
Ny tatitra avy any amin'ny renivohitr'i Kenya Nairobi dia nilaza fa ny filoha kenyan Uhuru Kenyatta dia nanafoana ny fameperana ny fivezivezena an'habakabaka tamin'ny lahateny nataony tamin'ny filoha farany teo amin'ny Covid-19 tao anatin'ny andro vitsivitsy izay narahina fanarahana hentitra ny torolàlana natao hamehezana ny fihanaky ny areti-mandringana.
Seranam-piaramanidina Dutch Dutch Dutch Airlines
Nilaza i Balala fa ny fahasalamana sy ny filaminana no mijanona ho laharam-pahamehan'ny governemanta indrindra, eo amin'ny fanokafana tsikelikely ny toekarena.
Emirates dia hanao sidina fampodiana an-tanindrazana any Dubai ny talata 28 jolay, miaraka amin'ireo mpandeha afaka mividy zavatra any amin'ny toerana lavitra raha mbola manaraka ny torolàlana momba ny dia any amin'ny firenena haleha izy ireo.
Ny fiverenana any amin'ny habakabaka Kenya sy Afrika Atsinanana amin'ny alàlan'ny kaompaniam-pitaterana dia hampisondrotra ny fizahan-tany isam-paritra, amin'ny fijerena ny toerana misy an'i Kenya ao amin'io faritra io.
Kenya Airways dia nanohy ny sidiny anatiny andro vitsy lasa izay satria nisy fepetra maro natao tao amin'ny seranam-piaramanidina Jomo Kenyatta hiantohana ny fiarovana amin'ny Coronavirus.
Ny mpandeha dia takiana amin'ny fanadiovana ny tanany imbetsaka ary koa amin'ny fanaovana sarontava, ary koa mandalo ny toerana fisavana ny mari-pana mba hiantohana ny fiarovana.
Ny fameperana ny fitsangatsanganana sy ny fampiatoana ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka iraisampirenena dia nahita trano fandraisam-bahiny samihafa nikatona tany Kenya sy ireo firenena mifanila aminy izay miankina amin'ny fotodrafitrasa fizahan-tany any Kenya no loharanon'ny mpitsidika azy ireo.
Nairobi no ivon-toeran'ny mpizahatany ary misy fifandraisana eo amin'i Eropa sy Amerika miaraka amin'ireo fanjakana isam-paritra Atsinanana sy afovoany afovoany.